Indlela yokubeka kakuhle umntwana oneminyaka elilodwa ukuba alele?
Uninzi lwabazali bezintsana zikholelwa ukuba umntwana uyazi oko kwaye uyifunayo. Kwinqanaba elithile, oku kunjalo. Umzekelo, umntwana osanda kuzalwa uyazi kakuhle xa elambile. Kwaye kulo mzekelo, abazali banokumthemba ngokupheleleyo umntwana wabo baze bamondle ngokufuna. Nangona kunjalo, ngokulala konke kunzima kakhulu. Indlela yokubeka kakuhle umntwana oneminyaka elilodwa ukuba alele? Funda ngale nto kwinqaku lethu lanamhlanje.
Umlinganiselo wobomi bomntu wasemadolobheni wanamhlanje, ngokuthe ngqo usapho olunomntwana, luchaphazela kakhulu ukuvisisana kokulala. Kwaye akunjalo nje ukuba intsana iphazamiseke izandi ezingaphandle (ithelevishini, iikhomputha, iimashishini zokuhlamba). Esinye sezibangela ezibalulekileyo zokuphazamiseka kokulala yombuso womntu omdala, kude nemvelo. Sithanda ukuhlala siphelile kwaye sivuke ngokukhawuleza (ngokukodwa xa kukho inokwenzeka).
Ukususela kwimbono yezokwelapha, ukulala kufuneka kudale iimeko ezithile zelizwe lokuvuka. Ngamanye amagama, umntu akafanele alale ngenxa yokuba ufuna, kodwa ngenxa yokuba ufuna, kwaye uvuke ngenxa yokuba walala, kodwa kungekhona ixesha lokuba asebenze okanye afunde. Kodwa, maye, oku kusemgangathweni, eqinisweni, yonke into ayinjalo, kwaye uluntu alufuni ukuqwalasela zonke ezi zinto ziphilayo.
Abantwana, ngokuchaseneyo, bakhetha ukulala baze bavuke kusasa. Inyani kukuba umzimba womntwana, kunye naluphi na uhlobo oluthile, luphila ngeengcamango ezikhethekileyo ezibeka imfuno yazo yokulala, kunye nomlinganiselo wexesha lokuvuka nokulala. Umnqweno wokulala ixesha elithile lenza i-biorhythms kuphela, kodwa neemeko zemozulu, indlela yokuphila kunye nempilo. Umntwana omncinci akafani.
Kwiinyanga ezi-10 zokuqala, iphupha lomntwana alisigxina. Inokuhlala kuphela imizuzu engama-20-40. Oku akunjalo, kodwa ngenxa yokuba ubuthongo obubusuku buqhubekile, aluyi kuthathwa njengesifo. Ngokuqhelekileyo nje ixesha elifutshane lokulala libangelwa ukuba umntwana ukhululeka ngexesha lomdlalo okanye umama akaqapheli umzuzu xa umntwana efuna ukulala. Emva koko, akusiyo yonke imfuneko ukuba umntwana uya kukwazi "ukubonisa" ukukhathala kwakhe, ngokukodwa kwinkqubo yomdlalo othakazelisayo. Kodwa kuyimfuneko ukufunda indlela yokujonga utshintsho ekuphatheni umntwana, ukuthetha ngokukhathala kwakhe. Umntwana ongalalwanga ukulala, xa sele esele akhathele ngokwaneleyo, urhulumente ogqithiseleyo unokuziqhelanisa. Oku ekukhuleni kungakhokelela ekusileni. Abantwana abaselula bayayithanda xa bafumana umyalelo othile. Kubaluleke kakhulu kubo. Ngako oko, le nxalenye yophuhliso ingasetyenziselwa ukuzinza umntwana okhuselekileyo. Umntwana angalala njani, ingakumbi ukuba sele sele ekhululekile? Into ebaluleke kakhulu apha akuyi kubangela ukuba umntwana (kunye nomntu omdala) abe noxinzelelo. Emva kwakho konke, ngexesha lokubeka umntwana ukuba alale, kuyithuba elihle lokuqhagamshelana kokomoya phakathi kwabazali kunye nomntwana ngokwakhe. Beka inkqubo ethile yezenzo oza kuyenza nomntwana ngaphambi kokulala. Umzekelo: uqokelele amathoyizi kwindawo yokubeletha kwaye unqwenela ukuba umntwana "ubusuku obuhle"; uthathe uhlambe olufudumeleyo; Hlabela i-lullaby uze unyikityise umntwana umntwana; yitsho intetho yokudlala (mhlawumbi kunye nentanda ethandekayo, yilale umntwana). Abantwana bathanda kakhulu ukuqhutywa komyalelo othile wezenzo, oko kuthiwa "imveli". Yimiqathango ebenza bancede bathuthuzelwe kwaye bazinze. Kwaye akunandaba nokuba umntwana uneminyaka engakanani okanye inyanga ubudala, nokuba umntwana okhulileyo uyazi kwaye alele ngokukhawuleza ukuba uya kulala ngexesha lemihla ephulaphule indalo okanye i-lullaby.
Nanku kuyimfuneko ukuba uthethe ngempembelelo enkulu ye-lullaby ebomini bomntwana. Iingcali zithi abantwana abangabethwanga yi-lullabies abaphumelelanga ngaphantsi kobomi kwaye banokuthi bafumane ubunzima beengqondo. Isizathu esibalulekileyo salokhu kukunyanga komntwana weentlobo zesondo ezikhethekileyo eziphuhliswa ngexesha lokucula phakathi komntwana nonina. Umama, ukukhupha umntwana, ukumkhathaza, kumnika ukufudumala novelwano. Oku kubaluleke kakhulu ekutshintsheni okuzolileyo ukulala. Akumangalisi ukuba abantwana abakhulile kwizikolo zokubhankqalaza, bengenakufudumala, bazive bekhuselekile bonke ubomi babo.
Ngokweminyaka yobudala umntwana akanakuqonda intsingiselo, kwaye into eyona nto kukuhambelana nesigqi. Ukongezelela, kukho ikhwelo elininzi kunye neengxolo zokubethela izandi kwi-text ya lullaby, ekuncediseni ukukhupha iziqhekeza:
Hush, inkukhu, musa ukwenza ingxolo,
Musa ukuvusa iSrara.
Ixesha liza, amakhwenkwe namantombazana akhula ngama-lullabies, kodwa ukufudumala nokuthatha inxaxheba kwothando lomama umntwana alufumanayo kwasebuntwaneni kuhlala. Kwaye kunokuba nantoni na inamandla ngakumbi kunothando lomama? Bulale abantwana bakho lullabies!
Izenzo zokuzivocavoca zemihla ngemihla kubantwana abantwana abaneminyaka engama-3-6 ubudala
Ukunyanzeliswa kwintsholongwane yesinyithi
Iimitha ezithengisa abantwana zeHrot Anders.
Iindaba zakutsha malunga noJennifer Garner
I-Omelette ene-shrimps kunye ne-avocado
Izizathu zobunxila obushushu
Ubuvila: buhle okanye bubi?
Ukuba indoda emva kwesondo ayinikezeli umhla wesibini
Ushizi owenziwe: inzuzo kunye nengozi
Imidlalo yokuzalwa yamantombazana
I-Puree ene-eggplant ne-goulash eyenziwa kwenyama
Isitala seengubo zeCoco Chanel